एनआरएनए जाम्बियाको अध्यक्षमा उप्रेती - Karobar National Economic Daily
एनआरएनए जाम्बियाको अध्यक्षमा उप्रेती
query_builderAugust 9, 2017 10:04 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility88
काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तेस्रो साधारणसभा गत हालै लुसाकामा सम्पन्न भएको छ ।
धारणसभाले डा. विशालनाथ उप्रेतीको अध्यक्षतामा सन २०१७–२०१९ का लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसमा शंकर सुनुवार उपाध्यक्ष, प्रमोद शर्मा महासचिव, मोतीलाल श्रेष्ठ सचिव, भीमबहादुर बम कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूमा डा. किशोर अधिकारी, पोषणराज बस्नेत, सन्ध्या खनाल, खेम नारायण पौडेल, शोभा सुनुवार र इन्दिरा उप्रेती रहेका छन् ।
सभाले बिदुर खनाल, अङ्गिरा आचार्य, सबिता आचार्य, नर्मदा आचार्य ढकाल, डा. रामजी ढकाल, डा. प्रकाशचन्द्र घिमिरे, रजनी श्रेष्ठ र केशव श्रेष्ठलाई सल्लाहकारमा चुनेको छ । सभामा अध्यक्ष बिदुर खनालले एनसीसी जाम्बियाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने कोषाध्यक्ष भीमबहादुर बमले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियोे । त्यसैगरी डा. प्रकाशचन्द्र घिमिरे संयोजक र रजनी श्रेष्ठ, ईश्वर भुषाल सदस्य रहेको निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो । सभाले जाम्बियामा प्रत्येक वर्ष ‘नेपाल डे’ को आयोजना गरी नेपालको पर्यटन र संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएनए जाम्बिया डा. विशालनाथ उप्रेती